Fasalada iskudhafan/fursadaha aasaasiga ah (ee waxbarashada dugsiyada sare) – skolekassa.no
English | Engelsk (Ingiriis )
العربية | Arabisk (Carabi)
Norsk (bokmål)‎‎ (Norwiiji(Bokmål))
Norsk (nynorsk)‎ (Norwiiji(nynorsk))
دری | Dari (Daari )
پښتو | Pashto (Baashtu)
Ku socota baraha
Ku saabsan dugsiga sare
Barashada qoraalka iyo akhrinta afka hooyo
Fasalada iskudhafan/fursadaha aasaasiga ah (ee waxbarashada dugsiyada sare)
Baro sida wax loo qoro loona akhriyo
Akhri oo dhegayso
Naxwo iyo dhawaaq
Qalab waxbarasho iyo koorsooyin af-noorwiiji ah
Baro alifbaada. Samee tababarada akhriska, dhegaysiga iyo qoridda ee uu xaraf kasta leeyahay.
Buugaag akhriskoodu fudud yahay.
31 buugaag elektroonik ah oo aad ka baran kartid maaddooyinka sayniska iyo cilmiga bulshada. Liis erayo oo taageeraya 25 luuqadood
Baro af noorwiiji, dhegayso, akhri oo ka shaqee su’aalaha. Waxaa loogu talo galay fasalada 1aad ilaa 4aad iyo fasalada 5aad ilaa 10aad.
Ku tababaro inaad si fasiix u akhrisid iyo inaad akhrisid erayada adag.
Wax ka baro naxwaha, qoraalka iyo afka adiga oo akhrinaya, dhegaysanaya iyo sameynaya waajibaadka.
NoW – grammatikk
Wax ku saabsan naxwaha ku akhri af ingiriis, iyada oo ay la socdaan tusaalooyin af noorwiiji iyo ingiriisi ah. Soo degso PDF.
Ku tababaro dhawaaqyada adiga oo dhegaysanaya, daawanaya iyo ku dhawaaqaya.
Ku tababaro dhawaaqa adiga oo daawanaaya fiidiyowyada dhawaaqa oo samee waajibaadka ku saabsan shaqallada iyo shibanayaasha.
Wax ka baro tibaaxaha(tacbiirada), ha laguu sharxo tibaaxaha oo samee waajibaadka. Sharaxaad af noorwiiji ah.
Qaamuus kula falcelinaya oo wata sawirro, qoraal iyo cod ay ku jiraan 34 luuqadood.
Baro erayo ku saabsan waxyaabaha aad ku qabatid dugsiga. Fal uu la socdo fiidiyow iyo cod. Arag erayo ku jira weero.
Fiiri sawirada oo ku dhegayso erayada af noorwiiji
Baro erayo cusub. Kala dooro afaf iyo mawduucyo kala duwan.
Soo degso Alfa, Godt sagt 1 iyo 2, akhri qoraallada oo dhegayso. Heerka: A1-A2.
Koorso internet-ka ah oo ah af noorwiiji heerka-B1. Waxay ka kooban tahay qoraallo, naxwe, waajibaadyo iyo xog ku saabsan afka noorwiijiga iyo bulshada.
Barashada bilowga ah ee af noorwiijiga ee loogu talo galay fasalada 8aad ilaa 10aad.
Baro waxa ay ka kooban tahay maadada af noorwiijigu isla marka aad baranaysid afka.
Su’aalo ku saleysan heerar kala duwan. Af noorwiiji aasaasi ah oo loogu talo galay dadka af ahaan laga tiro badan yahay.
Wararka iyo warbixinno ka imaanaya wadanka Norway oo dhan kuwaas oo ku baxaya af carabi, daari, kurmaanji, soomaali iyo tigrinya.
Ku shaqee maadada cilmiga bulshada adiga oo adeegsanaya kaarto mawduuc, su’aalo iyo kaarto eraybixin. Eraybixinada waxaa loo turjumay daari, baashtu, tigrinya, kurmanji, carabi iyo soomaali.
Qoraal hordhac ah oo ku saabsan dimuqraadiyadda iyo kali– taliska. Qoraalka waxaa loo tarjumay afaf kala duwan.
Waajibaadyo ah cilmiga bulshada, sayniska, xisaabta iyo af ingiriiska. Waa la adeegsan karaa iyada oo aan la haysan buugga Grip.
Bogga taariikhda ee mareegta Elevenskanalen waxaad ka baran kartaa wax ku saabsan dhacdooyin kala duwan, laga soo bilaabo aadanahii ugu horeeyey ilaa laga soo gaaro iska horimaadyada maanta ka jira dunida. Waxaad daawan kartaa fiidiyowyo waadna akhrin kartaa qoraallada.
Qoraal hordhac ah oo ku saabsan qeybaha dhulka iyo gobolada Norway. Qoraalka waxaa loo tarjumay afaf kala duwan.
Ka shaqee mawduucyo maadada cilmiga bulshada ah ee fasalada 8aad ilaa 10aad. Agabku waxa uu wataa qaamuus(bangi erayo).
Bogga maadada cilmiga bulshada ee mareegta Elevkanalen waxaad ka daawan kartaa fiidiyowyo aad ka baran kartid wax ku saabsan qofka, bulshada iyo dhaqanka, siyaasada iyo dimuqraadiyada, nolosha shaqada iyo ganacsiga iyo xiriirka caalamiga.
Daawo filimada ku saabsan aljabra. Laga soo qaatay mashruuca waxbarashada Dabacsan(la rogrogi karo)
Daawo filimada ku saabsan jajabka. Laga soo qaatay mashruuca waxbarashada Dabacsan(la rogrogi karo)
Daawo filimada ku saabsan tiro tobanle. Laga soo qaatay mashruuca waxbarashada Dabacsan(la rogrogi karo)
Daawo filimada ku saabsan fansaarada. Laga soo qaatay mashruuca waxbarashada Dabacsan(la rogrogi karo)
Daawo filimada ku saabsan joomatari. Laga soo qaatay mashruuca waxbarashada Dabacsan(la rogrogi karo)
Daawo filimada ku saabsan abyoone. Laga soo qaatay mashruuca waxbarashada Dabacsan(la rogrogi karo)
Xisaab loogu talo galay fasalada 8aad ilaa 10aad. Dulmar iyo sharaxaad wadata taageero afka hooyo ah.
Daawo filimada ku saabsan isla’egyada. Laga soo qaatay mashruuca waxbarashada Dabacsan(la rogrogi karo)
Bogga xisaabta ee mareegta Elevkanalen waxaad ka daawan kartaa fiidiyowyo farabadan. Waxaad ka baran kartaa wax ku saabsan tirooyinka iyo aljebrada, joomatariga, fansaarada, tirokoobka, dhaqaalaha iyo itimaalka. Mawduuc kasta wuxuu wataa Kahoot (Su’aalo Kedis ah)si aad u tijaabisida waxaad garanaysid oo aad xusuusatid.
Daawo filimada ku saabsan boqoleyda. Laga soo qaatay mashruuca waxbarashada Dabacsan(la rogrogi karo)
Baro gargaarka degdegga ah iyo sida aad naf u badbaadin kartid.
Filimaan iyo su’aalo ku saabsan cimilada oo ku qoran afaf kala duwan. Dooro luuqad filinka hoostiisa dhinaca middig.
Mareegta Elevkanalen waxaad ka heli kartaa filimaan, qoraallo iyo laylisyo saysis ah.
Qoraal hordhac ah oo ku saabsan goobaha dabeecadda kala duwan ee ku yaala dhulka. Qoraalka waxaa loo tarjumay afaf kala duwan.
Qoraal hordhac ah oo ku saabsan saameyta birisam iyo qaloocashada falaaraha ilayska. Qoraalka waa la tarjumay.
Qoraal hordhac ah oo ku saabsan fogaan(waddo), xawaare iyo ammin(waqti). Qoraalka waa la tarjumay.
Baro wax ku saabsan jirka, baro erayo cusub oo adeegso sawirro.
Bogga af ingiriiska ee mareegta Elevkanalen waxaad ka daawan kartaa fiidiyowyo aad ka baran kartid wax ku saabsan dimoqraadiyada, aadanaha, caafimaadka iyo sida ay walxuhu u shaqeeyaan.
Ku saabsan Skolekassa